Iimidlalo ezili-15 eziphambili ezivulekileyo zehlabathi ezinemizobo emikhulu ye-android kunye ne-ios
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-15 yeyona midlalo yehlabathi evulekileyo enemizobo emikhulu ye-Android kunye ne-iOS
I-15 yeyona midlalo yehlabathi evulekileyo enemizobo emikhulu ye-Android kunye ne-iOS
Sibuyele kuyo kwakhona kwaye ngeli xesha, sikuphathela i-10, kodwa eyona midlalo ilishumi elinesihlanu ivulekileyo! Imidlalo evulekileyo yehlabathi imalunga nenkululeko yokuhamba kwaye ikunike ukhetho lokuzonwabisa ngokwakho kwindawo oyinikiweyo.
Ukwenza umhlaba omkhulu wedijithali kufuna izixhobo ezininzi, nangona kunjalo, kwaye kuba sikhangela eyona midlalo ilungileyo, kuya kubakho abambalwa abahlawulwayo phakathi kwabo. Ayisiyonto imbi kangako, njengoko ikwalahla iintengiso ezikruqulayo kunye nezinye izinto ezenziwa ngabaphuhlisi ukwenza imali ngawe.
Kodwa ukuthetha ngokwaneleyo, sinemidlalo emininzi ekufuneka sihambile, ke masifike kuyo!
Isibeleko: Ukusinda kwelanga
Ixabiso: Simahla Khuphela kwiVenkile yeGoogle Play Khuphela kwiVenkile yeApple yeApple
I-Frostborn yi-RPG epholileyo exuba iintlobo ezimbalwa ezithandwayo. Isandla esinye, unesimilo sakho onokuthi usenze ngokwezifiso njengoko ubona kufanelekile kwaye uqeqeshe njengenye yeeklasi ezintathu ezikhoyo. Emva koko, kukho ii-apos eziqhelekileyo ze-RPG yokugqibezela uthumo kunye nokulinganisa. Kodwa kukho & apos; s nayo into yokusinda kuyo. Kuya kufuneka uqokelele izixhobo kwaye uphucule isiseko sakho ukuze ukhusele ngempumelelo kwiintshaba. Ukwenza oko, ungadibana nabanye abadlali bokwenyani, apho into yeMMO yomdlalo ingena khona. Imizobo ilungile kwaye amava akho onke aya kuba kwimeko apho iiapos ziyathandeka ukujonga.
Ufumana ntoni xa udibanisa i-subreddit 'a-day-in-russia', i-GTA kunye nesidingo sokukhawulezisa? Ewe, iMadOut2 BigCityOnline yeyona nto ikufutshane onokufumana impendulo. Yenza i-monster yokubaleka uphume kwi-Lada yakho oyithandayo, uqhube ujikeleze ujonge nokuba ulwe okanye ugqatso ezinye i-gopniks [гопник] okanye uqonde nje ngqo uzidubule, konke kukuwe. Umdlalo uvumela ukuya kuthi ga kubadlali abali-100 kwimephu, ke gcina iliso kwabanye abafuna ukwenza okufanayo nakuwe. IMadOut2 iyonwabisa ngokuzonwabisa ngombulelo kubaphuhlisi abakhethe ukuyenza kwaye uya kuba neeyure zokuyidlala.
Omnye umdlalo malunga nokuqhuba kodwa ngaphandle kwendlela uyisa kwinqanaba elitsha. Ungathatha ulawulo lwayo nantoni na ukusuka kumaphenyane ukuya koololiwe ukuya kwiihelikopta, kubandakanya zonke iintlobo zezithuthi ezinamavili ezinjengeelori kunye nabavuni! Wonke umatshini ubonelela ngemiceli mngeni eyahlukeneyo kwaye umhlaba ovulekileyo yindawo yakho yokudlala. Umdlalo ubonakalisa ubuchwephesha bokudaka kunye nokulinganisa uxinzelelo lwevili, zombini ezo zinto kunqabile ukuba uzive malunga nemidlalo, ngakumbi eziziimobhayili. Ukuba urhawuzelela ukhenketho lwasendleleni, ngekhe uhambe gwenxa ngalo mdlalo.
Ngo-Eva: Umdlalo oshukumayo okwi-Intanethi osaphuhlayo, i-Second Galaxy yeyona ndlela unokukhetha kuyo kukuhlola indawo. Amawaka eenkqubo zeenkwenkwezi ezandleni zakho, iziphekepheke ezisuka kwincinci ukuya kwezinkulu, iimfazwe ezinje ngokuba uzibonile kumdlalo bhanyabhanya we-Star Wars, i-Second Galaxy inayo yonke. Ngokuqinisekileyo, ukonwabela ubuhle bendawo akufani xa kusenziwa ngomboniso wefowuni yakho, kodwa ukuba nomdlalo obanzi njengale kwiintendelezo zakho kusakhwankqisa. Ukuba uyi-Sci-Fi geek ephelelwe yimiboniso yeTV ukubukela, iGlass yeSibini ilapha ukuzalisa loo nto.
Isivuthuvuthu iPirate Action RPG
Ixabiso: $ 7.99kwi-iOS,SimahlaKwi-Android Khuphela kwiVenkile yeGoogle Play Khuphela kwiVenkile yeApple yeApple
Ukusuka kubukhulu bendawo, sibuyela kubukhulu beelwandle zomhlaba. Ukuba amadabi aneelaser kunye nemijukujelwa axhokonxa wena, ungafumana isantya esicothayo solwandle sikonwabisa ngakumbi. Khetha isitayile sakho sokubhabha: qesha abasebenzi, wenze inqanawa yakho ngokwezifiso kwaye uhambe ulwandle, ugqibezele uthumo kwaye ulwe nezidalwa zasentsomini kwinkqubo. Zombini iinqanawa kunye namanzi zikhangeleka zimangalisa kwaye zinemidlalo enjalo, akukho nto yimbi ibalulekileyo ngokubonakalayo. Lawula inqanawa, jolisa iikhanoni kwaye uphange intabalala, konke emsebenzini wosuku kwiPest Pirate Action RPG!
IGenshin Impact yenye yezona RPG zintsha nezaziwa kakhulu. Ihlabathi likhulu kwaye iigrafiki zikhumbuza isimbo seThe Legend of Zelda: Ukuphefumla kwendle, okuncomayo. Abalinganiswa bahlukile kwaye bayonwabile ukudlala nabo, enika umdlalo itoni yexabiso ngokubhekisele ekubuyeleni kwakhona. Yeyiphi eyona & eyona nto ilungileyo onokuyidlala nabahlobo bakho kumaqonga ahlukeneyo kwaye ujonge eli hlabathi limangalisayo kunye, ulwa neentshaba ezingakaze zibonwe ngaphambili. Ukuba ungumntu othanda ezi ndidi zemidlalo, kuya kufuneka uzame iGenshin Impact!
I-Oceanhorn ngumdlalo omdala kodwa oko akuthethi ukuba iiapos azilunganga ngokwaneleyo ukuba zikuluhlu. Kwaye zezona zilungileyo kunye nokuba zezona zilungileyo kukuba ngoku simahla kwi-Android. Kwi-iOS kusafuneka uhlawule i-8 yeedola kuyo, okanye ungonwabela ukulandelelana, i-Oceanhorn 2 kwi-Apple Arcade. Umdlalo unemifanekiso evuyayo, yekhathuni kwaye unikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuba uhlolisise kwaye ukhangele ukuphanga ngelixa ubulala intshaba apha naphaya. Isenokungabi nazona zinto zibonakalayo zoyikekayo kodwa iya kuyenza iqhinga xa ufuna ukubulala ixesha elithile kwaye kunokuba ungadlali into enzima kakhulu kwiimvakalelo.
Imipu emithandathu imiselwe kwilizwe eliyinyani: kwintshona yasendle. Umdlalo wongeza ukujija kuwo, nangona kunjalo, ukutyhala imipu ngokugqithileyo ngokwendlela yoyilo kunye namandla, konke egameni lokonwaba. Usaqhubeka nokuhlola umhlaba ngasemva kwehashe lakho elithembakeleyo kodwa unokuxhotyiswa ngayo nayiphi na into esuka kwityathanga elixhonywe ngomphunga ukuya kumlilo ovuthayo. Ewe, ukuze ufumane ezona zipholileyo kuya kufuneka ubeke umgudu kodwa oko akuthethi ukuba awuyi kuba nexesha elimnandi. Imipu emithandathu ayinakuba yiRed Dead Redemption, kodwa ilungile njengokuba usiya kwiselfowuni.
I-Simulator yebhokhwe yathatha umhlaba ngoqhwithela ngobubhanxa bawo kwaye besingenakudlula kuwo. Ngumdlalo ongathathi nto ngokungathí sina, wamkela iibhugi kwaye unikezela iiyure zomdlalo omnandi. Njengoko unokucinga, umdlalo ukude kukulinganisa okwenyani kobomi beebhokhwe njengoko unokucinga, nangona iibhokhwe zithanda ukwenza izinto zentloko kwaye uya kwenza okuninzi kulo mdlalo. Ukuba kufuneka sichaze i-Goat Simulator ngegama elinye, yi 'mayhem', kwaye lolona hlobo lubalaseleyo kuyo!
Ngaba awufuni ukudlala njengebhokhwe? Njani ngengcuka endaweni yoko? Ngokungafaniyo neMbuzi Simulator, iiWolf Tales zithatha indima enkulu kakhulu. Kuya kufuneka ukhusele intsimi yakho, ulwe nezinye iingcuka kwiimfazwe ze-PvP kwaye uzalise amantshontsho eengcuka ukuze wenze ipakethi yakho yomelele. Kukho iintlobo ezahlukileyo zeengcuka onokuzivula, ngezakhono zazo kunye nobuchule. Lo mdlalo awunantlekisa. Ukuba & ampos; ungene kwiingcuka okanye kwizilwanyana zasendle ngokubanzi, uya kuba nokudubula okudlala iimbali zeWolf. Kukho umxholo ongaphezulu kunoko ubucinga ukuba kungakho kumdlalo onje. Ziziphi iindaba ezilungileyo rhoqo, ngoko kutheni ungazami?
Ixabiso: $ 4.99 Khuphela kwiVenkile yeGoogle Play Khuphela kwiVenkile yeApple yeApple
Umhlaba weStardew Valley usenokungabi mkhulu kodwa ungaphezulu kwezinto onokuzenza kuwo. Ukuba awuzange uve ngeStardew Valley, usenokuthandabuza ekuqaleni, kodwa ukuba uthatha isigqibo sokuchitha i- $ 5 kwaye uzame, awuyi kuphoxeka. Umdlalo umnandi ukudlala, ukuphumla kunye nokwanelisa. Umculo kunye nezandi ziyasifanela isitayile somdlalo ngokugqibeleleyo, usenzela amava amnandi kakhulu. Uya kucwina iiyure kuyo ungazi. Ikwakhona kwiapc ukuba ufuna ukuyidlala kwiscreen esikhudlwana kunye nebhodi yezitshixo kunye nemouse, eyenza izinto zibe lula kakhulu.
Ixabiso: Simahla Khuphela kwiVenkile yeGoogle Play
Khuphela kwiVenkile yeApple yeApple
UkuKhanya kweziQithi yiMMORPG ebonakala ngathi ifana neThe Legend of Zelda: Breath of the Wild ngokudibanisa ngobuchule iimodeli zemibala kwinto evuyisayo ukujonga. Njengoko isihloko sichaza, umhlaba wenziwe kwiziqithi ezahlukileyo uhambo lwakho luya kukuthatha kwaye nganye inento eyodwa eya kuyinikela. Ngaphandle kwezinto eziqhelekileyo ze-RPG, unakho nobuchule bokuyenza, ukwenza ubomi bakho bomdlalo bube lula. Ukuba unabahlobo abambalwa abanesithukuthezi abanokujoyina, kuqinisekisiwe ukuba kuya kuba mnandi ngakumbi, ngoko ke hlanganisa ipati yakho kwaye ulungele!
Isibhakabhaka: Abantwana bokuKhanya
Isibhakabhaka: Abantwana bokuKhanya ngokusisiseko yile nto uya kuyifumana ukuba iAlys's Odyssey yaba ngumdlalo we-3D adventure. Uhlobo olufanayo, kunye ne-pastel, imibala ekholisa amehlo kunye neendawo ezenza ukuba uzive ngathi usephupheni. Umhlaba weSibhakabhaka uzele yimimangaliso kunye neemfihlo onokuzityhila. Umoya opholileyo oya kukwenza uzive ungakumbi njengokucamngca kunokudlala. Abaphuhlisi bathembisa ukuqhubeka nokwandisa umdlalo ngeendawo ezintsha kunye neziganeko ke ukuba uthatha isigqibo sokutsiba kuwo, kuya kuba nokuninzi kokwenza ngoku nakwixesha elizayo.
I-GTA: San Andreas
Ixabiso: $ 6.99 Khuphela kwiVenkile yeGoogle Play Khuphela kwiVenkile yeApple yeApple
Khange ucinge ukuba siza kuthetha ngemidlalo evulekileyo ngaphandle kokukhankanya i-GTA, akunjalo? Ngokuqinisekileyo, iigraphics zibonakala ngathi zezomdlalo weselfowuni, kodwa iseyiSan Andreas esiyithandayo. Umgca webali mde kwaye uyabandakanyeka kodwa ukuba awungomntu olandela indlela emiselwe kwangaphambili, ukhululekile ukuba wenze nantoni na oyifunayo kwizixeko ezithathu ezibandakanya imephu okanye iindawo ezifihlakeleyo eziphakathi kwazo. Ngaba kufuneka sitsho ngaphezulu? Ngumdlalo we-GTA, uyazi ukuba wenzeni!
Okokugqibela, kodwa ngokuqinisekileyo kungaphelelanga apho, kuza imeko yehlabathi iMinecraft. Singayiphelisa loo nto, akukho mntu ushiyekileyo engazi ukuba yintoni iMinecraft. Yeyiphi eyona nto ivulekileyo kwihlabathi ngaphandle kwehlabathi onokulitshintsha libe yiyo nantoni na ofuna ukuyenza? Umdlalo weqonga weMinecraft ubonelela awulinganiswa ngeeyure, nkqu nangeentsuku. Abantu bachitha iminyaka bedlala lo mdlalo kwaye bayonwabela kakhulu njengoko benzile ngomhla wokuqala. Ukuba ngandlela thile awuzange uve ngayo ngaphambili, ulungele ukukhwela!
Umnyele we-s7 exynos vs snapdragon
isamsung galaxy s21 kwtshaja ephezulu
Indlela yokuvimba i-app kunye nesikhangeli seentengiso kwi-Galaxy S5 ngaphandle kwengcambu
Ukucinywa kweLG Watch Urbane 2nd Edition LTE ibuyela kwi-AT & T & apos; uluhlu olunxibayo
Ingxelo yeTafile ye-SQL
I-T-Mobile yandisa kwaye iphucule eyona nkonzo yayo intle kubathengi abatsha nabasele bekhona
Ungayibeka njani Parameterize ukuGuquguquka kwezinto
I-Spotify ekugqibeleni yongeza inqaku elicelwe ixesha elide kwi-app yayo ye-Android kunye nefriji encinci
Isamsung ye-Samsung S21 + ifumana isaphulelo esikhulu ngaphambi kwe-Amazon Prime Day
Eyona misebenzi mihle ye-iPad yokuThenga ngokuBalaseleyo, iAmazon, iVerizon kunye nokunye
IGlobal Buds Pro vs iBuds eziBukhoma
Ungakhubaza njani ii -apps ezizezinye ze-Android ekufumaneni uhlaziyo oluzenzekelayo (akukho ngcambu iyafuneka!)